Fihetsiketsehana an-dalambe no niseho tany Sydney sy Melbourne, an-jatony voasambotra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafampana Aostralianina » Fihetsiketsehana an-dalambe no niseho tany Sydney sy Melbourne, an-jatony voasambotra
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Alohan'ny diabe dia nanambara ny polisy fa misy politika tsy fandeferana amin'ny fihetsiketsehana ao Sydney, miaraka amin'ny kaomisera lefitry ny polisy any New South Wales, Mal Lanyon nilaza fa manampahefana 1,400 no halefa amin'izany.
Manohitra ny fameperana fanoherana ny COVID ny aostraliana.
Ny hetsi-panoherana tany Sydney sy Melbourne dia nitarika fifandonana tamin'ny polisy.
Fihetsiketsehana am-polony voasambotra.
Nipoaka androany ny hetsi-panoherana mahery vaika tany amin'ireo tanàn-dehibe roa any Australia. Ny asabotsy tolakandro dia nisy fihetsiketsehana tao Sydney sy Melbourne, niaraka tamin'ireo Australiana an'arivony nanameloka ny fepetra henjana henjana fanoherana ny COVID-19, ny fanidiana ny virus coronaavava ary ny baiko famandrihana, ny fiantsoana ireo teny filamatra sy ny fiakarana marika fanoherana ny fameperana, dia nirongatra haingana ho fanoherana mafana sy fifandonana tamin'ny polisy, izay namaly dipoavatra, sakana eny amin'ny arabe ary fisamborana maromaro.
Lahatsary nanao fihodinana an-tserasera dia nampiseho vahoaka marobe namakivaky an'i Melbourne, tamin'ny fotoana sasany nifanehitra tamin'ny fisian'ny polisy mavesatra naparitaka mba hanakanana ny diabe. Navoaka ireo mpanao fihetsiketsehana ho valiny.
Nisy fisamborana maromaro ihany koa nalefa sary tao Sydney, ary re ny lehilahy iray nikiakiaka hoe: “maninona aho no misambotra ahy?” rehefa notarihin'ny manamboninahitra izy.
Alohan'ny diabe dia nanambara ny polisy fa misy politika tsy fandeferana amin'ny fihetsiketsehana ao Sydney, miaraka amin'ny kaomisera lefitry ny polisy any New South Wales, Mal Lanyon nilaza fa manampahefana 1,400 no halefa amin'izany. Nanantitrantitra i Lanyon fa “Tsy ny hampiatoana ny fahalalahana miteny izany, fa ny hampiato ny fihanaky ny viriosy,” raha ny minisitry ny polisy David Elliott kosa nampitandrina ny mpanao fihetsiketsehana fa hiatrika ny “herin'ny polisy NSW”.
Ankoatry ny fametrahana polisy marobe, ny manampahefana dia nandidy ihany koa ny serivisy fitaterana an-dalambe tsy hitondra mpandeha ho ao amin'ny Central Business District ao Sydney, raha ny fiaran-dalamby kosa tsy hijanona amin'ny gara sasany manerana ny tanàna, araka ny tatitra avy any an-toerana. Hita ihany koa ny fanakanan-dalàna nataon'ny polisy tao Sydney, ezaka hanakatonana ireo arabe lehibe hanoherana ny diabe.
Tonga ireo demo taorinan'ny nanambaran'ny tompon'andraikitra any New South Wales ny hidinan'ny COVID-19 amin'ny zoma, izay saika hametraka ny antsasaky ny Sydneymponina 5 tapitrisa ao anatin'ny ora tsy iharan'ny alina hatramin'ny tapaky ny volana septambra. Efa misy baiko sahala amin'izany any Melbourne, midika hoe mihoatra ny ampahefatry ny AostraliaNy isan'ny mponina dia hijanona eo ambany fifehezana hidy, izay mitaky ny hipetrahan'ny mponina ao an-trano miaraka amina faningana vitsivitsy.
Ny praiminisitra NSW Gladys Berejiklian dia nilaza fa ilaina ny hetsika mba hampihenana ny fiparitahan'ny karazana Delta miharo aretina, izay nahatonga ny fitomboan'ny tranga manerana ny fanjakana. Notaterina 825 ny aretina azo avy eto an-toerana tamin'ny sabotsy, fiakarana lehibe avy amin'ny 644 nampisondrotra ny andro teo aloha.
Ny fanjakan'i Victoria, misy an'i Melbourne, dia nihatsara kokoa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, na dia manomboka mahita fihenam-bidy aza amin'ny tranga, mitatitra 61 nandritra ny 24 ora lasa izay, 57 tamin'ny andro roa farany. Victoria dia nahatratra ny tampon'ny volana aogositra lasa teo, raha nahita ny haavon'ny aretina 687 tao anatin'ny iray andro.